FAQs | Burlington Community Justice Center Vermont
मिशन / दर्शन / मान
पुन: स्थापना न्याय
समुदाय सल्लाहकार बोर्ड
कोष र साझेदार संगठनहरू
समुदाय पुन: प्रवेश / COSA
अदालत डायभर्सन / आरजे प्यानल
इजाजतपत्र निलम्बित (DLS) को साथ ड्राइभिंग
पुन: स्थापना न्याय प्यानल
तामारैक / उपचार डायभर्सन
रिटेल चोरी (RTAP)
एक दान बनाउनुहोस्
सेन्ट जोसेफको पुनःस्थापना जाँच
बर्लिtonटन: युवाहरूका लागि पुन: स्थापना शहर
विद्यालयमा पुनःस्थापना अभ्यासहरू
मुख्य शब्दहरूको परिभाषा
समानान्तर न्याय गाइड
पीडितहरूका लागि संसाधन
Q: तपाइँ कहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ र तपाइँसँग पार्कि have छ?
A: हाम्रो ठेगाना २०० चर्च स्ट्रीट हो, शहरको कुनामा कुनामा र किंग स्ट्रीट्स शहरको बर्लिंगटन (वर्तमान बर्लिंग्टन टेलिकम भवन)। दुर्भाग्यवस, हामीसँग आफ्नै पार्कि parking छैन, तर त्यहाँ दुई ब्लक त्रिज्या भित्र मिटर र गैर-मीटर पार्कि is छ।
प्रश्न: पुनःस्थापित न्याय भनेको के हो?
उत्तर: तपाईले सोधेकोमा हामी खुशी छौं। यस पृष्ठमा हेर्नुहोस्।
प्रश्न: सामुदायिक न्याय केन्द्र र अदालत मोड्नु बीच के भिन्नता छ?
उत्तरः कोर्ट डाइभर्सन एउटा कार्यक्रम हो, जुन भर्मन्ट कानूनमा रेखांकित गरिएको छ, जसमार्फत मानिसहरूले परम्परागत अदालत प्रक्रियाको विकल्पको रूपमा उनीहरूको गैरकानूनी कार्यको लागि जिम्मेवार लिन्छन्। सामुदायिक न्याय केन्द्रहरू (CJC's) फराकिलो छाता संरचना हो जुन अन्तर्गत स्थानीय रूपमा सेवा प्रदान गरिन्छ। चित्तेन सहित सात काउन्टीमा, अदालत डायभर्सन एउटा मुख्य न्यायाधीशले प्रदान गरेको छ। भर्मन्टको २० सीजेसीले सेवा विभागको एक एर्रे प्रदान गर्दछ, केन्द्रबाट फरक, सुधार विभाग द्वारा अनुदान दिएर। यसमा पूर्व र पछाडि विश्वास पुन: स्थापना प्यानल साथै कारावासमा फर्के पछि आफ्नो समुदायमा फर्केका व्यक्तिहरूको लागि सेवाहरू सामेल छन्। केही सीजेसीले कोषका अन्य स्रोतहरू मार्फत थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ। अदालत डाइभर्सन सबै काउन्टीमा प्रदान गरिएको छ र अटर्नी जनरलको कार्यालय द्वारा वित्त पोषित छ; यस कोषले सिभिल डीएलएस कार्यक्रम, युवा पदार्थ दुरुपयोग सुरक्षा कार्यक्रम, तामारैक, र प्रीट्रियल सेवाहरूलाई पनि समर्थन गर्दछ। कोर्ट डायभर्सन र CJC द्वारा प्रदान गरिएका धेरै सेवाहरू समुदाय स्वयंसेवकहरूमा निर्भर छन् र पुनःस्थापनात्मक न्याय सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्दछन्।
Q: मद्दत! कम उमेरको पिउने टिकटले मलाई भन्छ कि म तपाईंसँग १ days दिनमा सम्पर्कमा छु। मैले सन्देश पठाएको छु र छोडेको छु तर तपाईंबाट त्यस्तो जवाफ पाइनँ र घडीले टिक गरिरहेछ।
A: चिन्ता नगर्नुहोस्! हामीलाई कल गरेर र तपाईंको नाम, जन्म मिति, फोन नम्बर र शहर जहाँ तपाईंले रक्सी वा मारिजुआना उल्ल .्घन प्राप्त गर्नुभयो, छोड्नुभयो भने तपाईंले त्यो “घडी टिकि stop” रोक्नको लागि के गर्नुभयो। हामी अझै जारीकर्ता पुलिस विभागबाट वास्तविक टिकट र कागजहरू प्राप्त गर्न पर्खिरहेका हुन सक्छौं र हामी तपाईं बाट केही हप्ता सम्म पर्न सक्दछौं। हाम्रो स्टाफ सदस्यहरु मध्ये एक सम्पर्कमा हुनेछ।
Q: म मेरो छिमेकी संग एक बहस चलिरहेको छ। तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
A: सम्भावित! हामीसँग स्टाफमा प्रशिक्षित मध्यस्थकर्ता छ, बार्बरा श-डोर्सो, जसलाई तपाईं bshawdorso@burlingtonvt.gov मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। जबकि हामीसँग सबै केसहरू लिने क्षमता छैन, हामी तपाईंसँग विवरणहरू छलफल गर्न सक्दछौं, उपयुक्त भएको खण्डमा उल्लेख गर्दछौं र केही केसहरूमा सम्भावित रूपमा तपाईसँग यहाँ मुद्दा हाल्छौं।
Q: म सफलतापूर्वक अदालत डाइभर्सनको माध्यमबाट गएँ र अब काम / स्कूलमा भर्ना गर्दै / आवेदन दिँदैछु। के मैले मेरो रेकर्ड खुलासा गर्नु पर्छ?
A: यदि तपाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो अदालत डायभर्सन प्रक्रिया पूरा गर्नुभयो भने, तपाईंको रेकर्डलाई छाप लगाइएको वा काटछाँट गरिएको थियो र तपाईंलाई अपार्टमेन्ट भाडा र प्राय: रोजगार अनुप्रयोगहरू जस्ता प्रायः केसहरूमा यसको खुलासा गर्न आवश्यक पर्दैन। यद्यपि त्यहाँ केहि अपवादहरू छन् जुन राज्य अनुसार फरक हुन सक्छ। जब राज्य-द्वारा जारी व्यावसायिक इजाजत पत्रहरू (जस्तै कानून अभ्यास गर्न आवेदन), संघीय र केहि राज्यको कानून प्रवर्तन स्थितिहरूको लागि आवेदन गर्दा), सार्वजनिक कार्यालयको लागि आवेदन गर्दा, जब बन्दुक खरीद गर्दा वा लुकाइएको क्यारी परमिटको लागि आवेदन गर्दा, वा आवेदन गर्दा एक स्कूल सम्बन्धित काम को लागी, तपाइँ खुलासा गर्न आवश्यक हुन सक्छ। थप जानकारीको लागि, तपाईं एक वकील परामर्श वा VT कानूनी मद्दत वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ ।
Q: तपाइँ मलाई आवास को लागी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
A: जबकि हामी आवास सेवाहरू प्रस्ताव गर्दैनौं, हामी तपाईंलाई स organizations्गठनलाई स point्केत गर्न सक्छौं जुन गर्छौं। यदि तपाईं भर्खर जेलबाट छुटेको छ भने, हामी हाम्रो सामुदायिक पुन: प्रवेश सेवाहरू मार्फत केही मद्दत प्रस्ताव गर्न सक्छौं ।
Q: म सुरक्षित ड्राइभिंग क्लासको लागि साइन अप गर्न चाहन्छु। के तपाई मलाई त्यसका साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
A: बर्लिंग्टन सीजेसीले सेफ ड्राइभि class क्लास प्रदान गर्दैन, यद्यपि तपाईं चित्तਡੇन काउन्टी वर्गहरू फेला पार्न हाम्रो घटना पृष्ठ हेर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप गर्नका लागि व्यक्ति (हामीलाई तपाईको वकिल, प्रोबेशन अफिसर, आदि) लाई दर्ता गर्ने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Q: मलाई प्यानेलमा दर्साइएको थियो। सेवन गर्न कति समय लाग्छ? सम्पूर्ण प्रक्रियामा कति समय लाग्न सक्छ?
A: एक सेवन सामान्यतया एक घण्टा हुन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सामान्यतया 3-4- months महिनाको बीचमा हुन्छ, तर तपाईंको अनुबन्ध आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने तपाईंको क्षमता र हाम्रो तालिका उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ।
प्रश्न: जब म उमेर नपुगेको पिएँ एक पुलिसले मलाई कागजको गुच्छा दिए। मैले अब के गर्नु पर्ने हो?
A: तपाईंलाई सायद हाम्रो युवा पदार्थ दुर्व्यवहार सेफ्टी प्रोग्राममा सन्दर्भित गरिनेछ तर तपाईंसँग तपाईंको उमेर गलत प्रस्तुत गर्ने / नक्कली आईडी प्रयोग गर्ने बारेमा टिकट हुन सक्छ। हामी तपाई संग प्रत्येक को लागी अर्को चरणहरु मा कुरा गर्नेछौं। हामीलाई कल दिनुहोस्! बल्लालाई 2०२-73535-827575 at मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा bsankareh@burlingtonvt.gov मा ईमेल गर्नुहोस्
Q: म एउटा अपराधको सिकार हुँ तर थाहा छैन मेरो केसमा के भइरहेको छ।
A: हामी दु: खी छौं, तपाईंले यो अनुभव गर्नुभयो। यदि तपाईं बर्लिंगटनमा कुनै अपराध र / वा क्षतिको शिकार हुनुभयो र यो पुलिसलाई रिपोर्ट गरिएको थियो भने, समानान्तर न्याय कार्यक्रमका कर्मचारीहरू घटनाको एक हप्ता भित्र तपाईंसँग सम्पर्कमा रहनुपर्दछ। यदि तपाईंले पुलिसलाई रिपोर्ट गर्नुभएन, वा समानान्तर न्यायबाट अझै सुन्नु भएन भने, ती स्रोतहरू, सहयोग, र तपाईंको केसको बारेमा जानकारी र अपराध पछि हुने कुरा तपाईंलाई सहयोग गर्न उपलब्ध छन्। किम जोर्डन (2०२) २44-०764 or वा kjordan@burlingtonvt.gov र एंथनी ज्याक्सन-मिलर (2०२) 4040०-२3944 वा ajacksonmiller@bpdvt.org मा यदि तपाईं बर्लिंग्टन बाहिर अपराधको सिकार हुनुभयो भने, हाम्रो समानान्तर न्यायकर्मीले गर्न सक्दछन्। तपाईको क्षेत्रमा श्रोतहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
Q: म एउटा अपराधको सिकार हुँ जसलाई तपाइँको प्यानल प्रक्रियामा पठाइयो। म भाग लिन चाहन्छु तर मलाई पक्का छैन कि म उही कोठामा जिम्मेवार व्यक्तिको साथ हुन सक्छु। म अझै भाग लिन सक्छु?
A: पीडितको सहभागिता पूर्ण रूपमा स्वैच्छिक हो र प्रक्रिया मार्फत तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन तपाईसँग एक शिकार सम्पर्क हुनेछ। तपाई यहाँ पुनःस्थापनात्मक न्याय र समानान्तर न्याय को बारे मा अधिक जान्न सक्नुहुन्छ। पुनर्स्थापनात्मक न्याय भनेको अपराधको लागि जिम्मेवार व्यक्ति, अपराधबाट पीडित व्यक्ति (हरू) र समुदाय एकसाथ कुराकानीको बीचमा समझदारी र कुराकानीको बारेमा हो। पीडितको लागि सहभागिताका धेरै सम्भावित लाभहरू छन्। यसले तपाईंलाई घटनाको समयमा अपराधीको दिमागमा के हुँदैछ सो सुन्न अनुमति दिन सक्छ र उसले / उनी / उनीले / त्यसबेलाको बारेमा के सोचेका छन्; तपाइँसँग घटना साझा गर्न को लागी साझा गर्न को लागी एक अवसर हुन सक्छ; र तपाइँ अपराधीको प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ तपाइँलाई के भयो र किन भयो भनेर मात्र बुझ्न मद्दत गर्न। यदि तपाईं व्यक्तिमा भाग लिन चाहनुहुन्न भने, अन्य विकल्पहरू तपाईंलाई उपलब्ध छन् तपाईंको लेख लिखित रूपमा साझेदारी गर्नु र / वा तपाईंको शिकार सम्बन्ध कब्जा गरेर र प्यानलको साथ तपाईंको दृष्टिकोण साझा सहित। युवा अवस्थाका लागि कृपया किम जोर्डन (2०२) २44-०764 or वा kjordan@burlingtonvt.gov मा सम्पर्क गर्नुहोस् । वयस्क मामिलाहरूको लागि कृपया बार्बरा शा-डोर्सोलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
(2०२) २44-०765 or वा bshawdorso@burlingtonvt.gov
Restorative न्याय बारेमा थप सोधिने प्रश्न हेर्नुहोस् यहाँ र कोर्ट मोड बारेमा यहाँ ।
२०० चर्च स्ट्रीट
बर्लिtonटन, VT ०4040०१